အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ဖားကန့်ဒေသ ရေကြီးမှုမှတ်တမ်း
31 Responses to “ဖားကန့်ဒေသ ရေကြီးမှုမှတ်တမ်း”
ကိုယ့်အတွက်ပဲကြည့်.. ကိုယ်ရရင်ပြီးရောဆိုပြီး တကိုယ်ကောင်းအတ္တသမား၊တွေကြောင့်
လောဘကြီးပီး ငွေမျက်နှာတစ်မျိုးထဲကြည့်တဲ့လူတွေ ရှိနေသေးသမျှ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေဟာ လူသိလိုက်တာတွေရှိသလို လူတွေမသိလိုက်ပဲ ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ ရင်နာစရာတွေလည်း အများကြီး ရှိနေမှာပါ.... မြင်ရသိရတော့ စိတ်မကောင်း မကျေနပ်တာကို တောက်ခေါက်ရုံကလွဲပီး ဘာများလုပ်လို့ရမလဲ... တနေ့နေ့ရောက်ရင်ပေါ့လေ.. ၀ဋ်ဆိုတာပြန်လည်မှာပါ သူတို့အတွက်..
ကံကြမ္မာက အဆင်သင့်စောင့်ပီး ရှိနေမယ်ထင်ပါတယ်.. စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ ..ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ မိသားစုတွေနဲ့ထပ်တူ ခံစားရပါတယ်..
တကယ်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဒေသခံတွေဘဲ ခံကြရတယ်လေ။ စီးပွါးရေးလုပ်တဲ့သူတွေက ဘယ်သူ့မျက်နှာကိုမှ ကြည့်ကြမဲ့သူတွေ မဟုတ်ဘူး။ အမှန်ဆို အခုလို ရေတားတမံ ကျိုးပျက်လို့ အိမ်တွေရွာတွေ နစ်မြှပ်ဒုက္ခရောက်ကြတာဟာ အဲဒီလုပ်ငန်းတာဝန်ခံတွေမှာ တာဝန်ရှိတယ်။ သူတို့နှင့်တိုက်ရိုက်ပတ်သက်တယ်။ အတောင်လှတဲ့ငှက်ဟာ အတောင်ကြောင့် အန္တရာယ်ရှိနိုင်သလို...ဦးချိုလှတဲ့ သမင်ဟာ ဦးချိုကြောင့် ဒုက္ခရောက်ရသလို...ကျောက်စိမ်းထွက်တဲ့ အမတို့ ဖားကန့်ဟာလဲ အဲဒီကျောက်စိမ်းကြောင့် ဒုက္ခရောက်ကြရမှာ မြင်ယောင်ပြီး တကယ်ကို စိတ်မကာင်းဖြစ်မိပါတယ်။ ကြိုတင်ပြီး ညီညီညွတ်ညွတ်ကာကွယ်နိုင်ကြပါစေ။
စိတ်မကောင်းလိုက်တာ လူတွေ တော်တော် ဒုက္ခရောက်ကြမှာဘဲ အင်း မကြုံဘူးအောင် ဘဲနော်
အေးချမ်းပါစေ ညီမရယ် အရာရာ အဆင်ပြေအောင် နတ်ကောင်းနတ်မြတ်များ ကြည့်မနေကြပါနဲ့
ရတနာထွက်တဲ့ဒေသဆိုတော့လည်း နတ်ကြီးတာလည်းပါမှာပေါ့ ။
ဒီကြားထဲ လောဘသားတွေက တရားမရှိ ပဲ လုပ်ချင်တာ လုပ်နေကြတော့
အဲလိုနေရာဒေသတွေမှာ နေတဲ့သူတွေအတွက် ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်..။
ရွှေစက်တော်မှာ ရေကြီးတုန်းကလိုပေါ့...အဲလိုနေရာတွေက အမှားမခံဘူးလေ...။
မြန်ပြည်တခွင် စိမ်းစို လန်းဆန်း...ပျော်ရွှင်သာယာ စေ ချင် ပါသည်။
ထို့ကြောင့်.... အသန့်စင် ဆုံး ဆုတောင်း နှင့် နွေးထွေးသော မေတ္တာ ပေး ပို့ ပါ သည်။
တို့မြန်ပြည်သူ/သား တွေ ဘေးဘယာ ဝေးကာလို့ ပြုံးပျော် ရွှင်လန်း ၊ တဦး နဲ့ တဦး စာ နာ ထောက် ထား ကူ ညီ ရိုင်း ပင်း နိုင် ကြပါစေ သား။ ပျော်ရွှင်ခြင်း တံ တား တွေ ပေါင်း ကုး ယှက် နွယ် ခိုင် မြဲ နိုင် ကြ ပါ စေ သား။
စိတ်ညစ်မိပါတယ်.. သတင်းတွေကိုကြားပြီးတော့ ပုံလေးကိုမြင်လိုက်ရတာနဲ့ အတိဒုက္ခ ဘယ်လောက်ရောက်မလဲဗျာ....
အတော်ကြောက်စရာ စိတ်ပျက်စရာပါပဲ အမရေ ။ လူနည်းစု ရဲ့ လောဘ ကလူအများအတွက် ဒုက္ခဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်...
ရေတော်တော်ကြီးတာပဲ..။ အခုလိုတင်ပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်..။ ဒီလိုသတင်းအတိအကျက မချော တင်ပေးလို့သာ သိရတာလေ။ စိတ်ညစ်စရာတွေ တင်တယ်လို့ မတွေးပါဘူး။
သူတို့တွေ သနားပါတယ်နော်။ ဘယ်လောက်များ သောကတွေ ရောက်နေကြလိမ့်မလဲ..
ရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့နေရာလေးကို စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ ကြည့်သွားခဲ့ပါတယ်
သဘာဝတရားကလည်း မတော်မတရားတွေ အပြုခံရဖန်များတော့
စိတ်မကောင်းစရာပဲ မမချော ရေ ...
တနပ်စား သမားတွေ အုပ်ချုပ် နေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ကြိုး သာ ကြည့် တတ် တဲ့ 
တစ်ဘို့ထဲ သာ ရှိတဲ့ဝိသမ သမား တွေ က မချော တို့ဖားကန့်ဒေသ တင်မဟုတ်
ဟိုး တစ်လောက ကြား လိုက်တာ ပုပ္ပား ဒေသ မှာ မောင်တေဇ ကို လက်ဖက် ဆိုက်ဖို့အကွက်
လဲ ချပေး လိုက်ရော ဘူဒိုဇာ နဲ့အကုန် မြေလှန်လိုက် တာလေ ၊ ရေထွက် တွေ ကုန် ပါ ရောလား..၊
နှစ်အဆက်ဆက် က နာမည် နဲ့ကျော်ကြား လာ ခဲ့တဲ့“ ဖားကန့် ” ဒေသ အတွက် ...
စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ် အစ်မရယ်...ထိမ်းဖို့သိမ်းဖို့မေ့များနေကြလားမသိ :( မေ့ချင်ယောင်ဆောင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ :)
ချောရေ...လောဘတွေများ ကြောက်စရာ တယ်ကောင်း...။ ဒီလိုရတနာ ထွက်တဲ့နေရာတွေက လောဘကြီးလို့ မရဘူးလို့ ကြားဖူးတယ်။ ဒေသခံတွေ သနားပါတယ်၊ ချောရဲ့ ဒေသချစ်စိတ်လေးကို ဒီပိုစ့်မှာ အထင်းသား တွေ့လိုက်ရတယ်....:)
စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲ ပုံတွေ ကြည့်သွားပါတယ်ဗျာ.. အမြန်ဆုံး သာယာချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့လဲ ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ်ခင်ဗျာ..
ဒီလိုနဲ့ပဲ တနိင်ငံလုံးလည်း ကုန်မှာပါပဲ...။ လူတန်းစား ကွာဟချက်တွေလည်း မိုးနဲ့မြေလို ဖြစ်နေပြီ။ ကျောက်တူးတဲ့ သူဌေးတွေက မြို့ပေါ်မှာ ဇိမ်ကျနေတုန်း ဒေသခံတွေက ငရဲပျက် သလို ဖြစ်နေရရှာပြီ။ ပုံတွေက ငြင်းမရအောင်ကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်နဲ့မို့ အမှန်တကယ် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ ကိုယ့်မိသားစုသာ ရှိနေရင် ဆိုတာတောင် မတွေးဝံ့ဘူး။ ငွေဆိုတာ လူတိုင်းနီးနီး သည်းခြေကြိုက် ဆိုပေမယ့်
စီးပွားရေးသမားတွေလည်း သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် ကြည့်စေချင်တယ်။
အရမ်းမူးတယ် ဇေကသိပ်ပျော်တာရေတတ်ရင် ၊ မိုးရွာရင်မိုးရေချိုးမယ် မေမေလာရင်နို့စို့မယ် ဖေဖေလာရင်အုန်းသီးခွဲစားမယ် ၊ ရေတတ်လာရင်လှေစီးမယ် ၊ လေတိုက်လာရင်စွန်တွေလွတ်ပါမယ်။။။
ဟင်းးးး အဲ့လိုတွေတွေ့ရတိုင်း ရင်မောတယ် ။ စိတ်လဲမကောင်းဘူး ... ။ ကိုယ်တို့တွေ ဘာတတ်နိူင်သလဲ၊ ဘာလုပ်ပေးနိူင်သလဲ ဆိုတာသာ စဉ်းစားမိတယ် .......ကိုယ်တို့ ကမ္ဘာကြီးမှာ အဲ့လို မြင်ကွင်းတွေ မြန်မြန်ပျောက်ကွယ်ပါစေ ။။
အရမ်း စိတ်မကောင်းစရာပါ ပဲဗျာ.. ကျွန်တော်လည်း ရေဘေးတစ်ခါမိဖူးတယ်.. ကိုယ်ချင်းစာတယ်ဗျာ..
ပုံတွေကြည့်ပြီး မမချောစာတွေဖတ်ရတာ ရင်ထဲထိခိုက်လိုက်တာ... ဒေသခံတယောက်ရဲ့ ခံစားချက်ကို ဒေသခံတွေရဲ့ ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေကို နားလည် ခံစားပေးလို့ရပါတယ်... ဒေသခံမဟုတ်ပေမယ့်လဲ ကိုယ့်နိုင်ငံဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံက လူတွေ ဒီလို ဒုက္ခတွေ ခံစားနေရတာကို မြင်ရကြားရတာနဲ့ တင် မမချောလောက် နီးနီးခံစားရပါတယ်...နာဂစ် နဲ့ တရုတ်ပြည် ငလျင် ကိစ္စပြီးကတည်းက တကမ္ဘာလုံးက အပြစ်မဲ့တဲ့လူဖြစ်ဖြစ် အပြစ်ရှိတဲ့လူဖြစ်ဖြစ် လူတွေ သတ္တဝါတွေကို ဒီမျိုးအဖြစ်တွေ ထပ်မဖြစ်စေချင် ထပ်မကြားချင်တော့ဘူး....
ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသား အားလုံး ဘေးအန္တရယ်ကင်း ငြိမ်းချမ်း သာယာကြပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းနေရတာပါပဲ... ဒီလို အနိဌာရုံတွေ ဘယ်သူကိုမှ မတွေ့စေချင် မခံစားစေချင်တော့တာ ရင်ထဲက ဆန္ဒအမှန်ပါပဲ
ချောရေးမယ်ဆိုလည်းရေးချင်စရာ။ တော်တော်ကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်ခဲ့တာပါလားနော်။ ၀ိသမလောဘသားတွေကတော့ ဘယ်မျက်နှာမှမထောက်ညှာပဲ မိမိအထ္ထရှေ့တန်းတင်ပြီး လုပ်နေကြမှာပါဘဲ။ သူတို့ရဲ့ အထ္ထတွေကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အလှတရားတွေ ပျက်စီးယိုယွင်းရတာ သိပ်ကို နှမြောဖို့ကောင်းလှသလို.. သူတို့ကိုလည်း ဒေါသထွက်ဖို့ ကောင်းလှတယ်။ ဒေသအပေါ်မှာထားတဲ့ ချောရဲ့ စိတ်စေတနာကောင်းလေးကို မြင်ခွင့်ရလိုက်တယ်။ လေးစားပါတယ်ချောရေ..။
မြင်၇တာစိတ်မကောင်းဘူး..အင်း ဘယ်တော့များမှ ဒီဘဝတွေကလွတ်နိုင်မလဲနော်။
website မှာပဲ တင်ထားတော့ အင်တာနက်သုံးသူလောက်ပဲ ဖတ်နိုင်မှာ၊
ရေးထားတာ အချက်အလက်တွေကလဲ စုံ၊ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာ၊ ဖြစ်နေတာ၊ ဖြစ်ဦးမှာ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ပြည်တွင်းက ဂျာနယ်တွေကို ပို့ရမှာ၊ မပို့ဘူးလား၊ ပို့ပြီးပြီလား၊
မဟုတ်ရင် ပို့ပေးဖို့တစ်ယောက်ယောက်ကို မေးပေးရမလား၊
ဂျာနယ်မှာဆို လူပိုသိတယ်၊ ဒါတွေက တားဆီးရမှာ၊ နည်းလမ်းရှာနိုင်ကောင်းပါရဲ့၊
အကြံပေးတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်.. စိုးရိမ်ပူပန်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အားလုံးကိုလဲ ကျေးဇူးပါနော်..
ဂျူက ဖားကန့် မရောက်ဖူးပါဘူး။
ဖားကန့်မှာ ရေကြီးတတ်တယ်ဆိုတာ မသိဘူး။
ခုမှသိတာ။ စာတွေရော ပုံတွေရော ဖတ်သွားပါတယ်။
စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ် မချောရေ....ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ရတာနဲ့တင် ဘယ်လောက်ဆိုးရွားသလဲသိနေရပါပြီ.....
လေးလေးနက်နက်ရေးထားတဲ့ စာလေးကို ဖတ်ပြီး မျှဝေခံစားသွားပါတယ် ချောရေ။
သဘာဝတရားကတော့ သတိပေးနေပြီနော်.... ခံစားရတဲ့သူတွေလည်း နာလှပြီ။ ကိုယ်ကျိူးတခုတည်းကြည့်တဲ့သူတွေ အချိန်မီ အသိတရားဝင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရုံမှတပါး......
ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ လူတွေ၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက်သာ ကြည့်တတ်တဲ့လူတွေ များပြားလာတဲ့အခါ ရလဒ်က ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတော့တာပဲ။ ဒေသခံတွေအတွက် ရင်ထဲမှာ တကယ်မကောင်းဘူး။ ဘယ်သူမှ မတတ်နိုင်ကြတော့ဘူးလား။း(
ဒေသခံတွေအတွက် ရင်လေးမိပါတယ်အမရေ...ပြီးတော့ ကိုယ်ချင်းလည်းစာမိတယ်..လူတွေရဲ့ လောဘတွေဟာ အရမ်းကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်....အတ္တတွေကြီးလိုက်ကြတာ...
Moe Thandar Hlaing said...
This isagood blog. Keep up all the work. I too love to blog. This is great everyone sharing opinions :)